वाग्मती प्रदेशको विद्युत् चु’हावट घट्यो ! – Nepal Online Khabar
वाग्मती प्रदेशको विद्युत् चु’हावट घट्यो !
भाद्र १२, २०७८ शनिबार 158
काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वाग्मती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाको विद्युत् चु’हावट कम हुँदै गएको छ । प्रदेश कार्यालयअन्तर्गतका छ विद्युत् कार्यालयको चु’हावट घट्दै गएको बताइएको छ ।
सो कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६\_०७७ मा डिभिजन कार्यालयको विद्युत् चु’हावट ८.०८ प्रतिशत रहेकामा गत आव २०७७\_०७८ मा ७।७२ प्रतिशतमा झरेको छ । उक्त कार्यालयको ६।३७ प्रतिशतमा चु’हावट कम गर्ने लक्ष्य रहे पनि पुग्न सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाअन्तर्गत मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली गरी तीन जिल्लाका छ विद्युत् वितरण केन्द्र रहेका छन् । ,हेटौँडाअन्तर्गत हेटौँडा वितरण केन्द्र, पालुङ वितरण केन्द्र र टाँडी वितरण केन्द्र, भरतपुर वितरण केन्द्र चनौली र सिन्धुली वितरण केन्द्र रहेका छन् ।
चितवनको टाडी विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् चु’हावट १२।७७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव ०७६\_०७७ मा १६.५३ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा चु’हावट नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ । टाडीको चु’हावट १२।५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । यसैगरी चितवनको भरतपुर वितरण केन्द्रमा पनि विद्युत् चु’हावट दर घटेको छ ।
गत आव ५।४८ प्रतिशतमा विद्युत् चुहावट झरेको छ ।त्यसैगरी सिन्धुलीको चनौली विद्युत् वितरण केन्द्रमा पनि विद्युत् चु’हावट कम भएको बताइएको छ । अघिल्लो आव २०७६\_०७७ मा १६.३६ प्रतिशत चु’हावट रहेकामा गत वर्ष १४.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
त्यहांँको विद्युत् चु’हावट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । त्यसैगरी सिन्धुली विद्युत् वितरण केन्द्रको विद्युत् चु’हावट बढेको तथ्याङ्क पाइएको छ । अघिल्लो आव २०७७\_०७८ मा चुहावट बढेर १६.५२ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
सिन्धुली वितरण केन्द्रले गत वर्ष छ प्रतिशतमा चु’हावट झार्ने लक्ष्य लिएकामा १६।५२ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी मकवानपुरको हेटाँैडा वितरण केन्द्रमा चु’हावट केही बढेको पाइएको छ । गत वर्ष विद्युत् चु’हावट ५।११ प्रतिशतमा पुगेको बताइएको छ ।
त्यस्तै मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका पालुङ वितरण केन्द्रको आव २०७७\_०७८ मा विद्युत् चु’हावट केही बढेको जनाइएको छ ।पालुङ वितरण केन्द्रले विद्युत् चु’हावटलाई गत वर्षमा ७.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि आव २०७६\_०७७ मा ८.३५ प्रतिशत चु’हावट रहेको तर गत आवमा विद्युत् चु’हावट २६.५५ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ ।
Prevचितवनमा ४ दिनमै प’क्राउ परे ८९ फरार आ’रोपी !
Nextबा’ढीले १५ सय घर डु’बानमा : पाँचको मृ’त्यु, चार बे’पत्ता !